Soo saaraha ugu wanaagsan ee Haydarooliga soo saaraha iyo Warshadda | Hadal
Winch Haydarooliga lagu dhajiyay gearbox meeraha, wiishka, matoorka korontada iyo korontada gargaarka. Waxay ka kooban tahay naqshad kooban, miisaan fudud, cadaadis shaqo oo sarreeya, xasillooni wanaagsan. Xuddunta wax soo saarka: 7.5-620KNm Taxanaha winch Vehicle ayaa isku dhafan tiknoolajiyadeena patent-ka ee soo socdey, kaas oo awood u siinaya horumarka sheyga iyo tayadiisa sare. Nooca badeecadan ayaa si ballaaran loogu rakibay saarista gaariga badbaadinta, guud ahaan baabuurta dalka, gawaarida culus ee milateriga, cagaf cagaf. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu badbaadiyo variou ...
Winch Haydarooliga lagu dhajiyay gearbox meeraha, wiishka, matoorka korontada iyo korontada gargaarka. Waxay ka kooban tahay naqshad kooban, miisaan fudud, cadaadis shaqo oo sarreeya, xasillooni wanaagsan.
Xuddunta wax soo saarka: 7.5-620KNm
Taxanaha winch Vehicle waa isku dhafan tiknoolajiyadeena patent-ka ee soo-jireenka ah, kaas oo awood u siinaya horumarinta wax soo saarka iyo tayadiisa sare. Nooca badeecadan ayaa si ballaaran loogu rakibay saarista gaariga badbaadinta, guud ahaan baabuurta dalka, gawaarida culus ee milateriga, cagaf cagaf. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu badbaadiyo gawaarida kala duwan ee waxyeellada soo gaadhay ama ku dhex quustay dhoobo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu jiido walxaha culus iyo hawlgalka is badbaadinta.
taxanaha winch gawaadhida korontada ku shaqeeya waa alaabteena shatiga loo haysto. Gawaarida gawaarida waxay ka kooban yihiin noocyo kala duwan oo loo qaybiyeyaal ah oo leh walxaha xarkaha ee xakameynaya bareegga iyo hal ama laba waardiye oo dheellitiran, matoor hawo, nooca B jejebiyey, C nooca meeraha geerka, durbaanka, jir iyo wixii la mid ah Isticmaaluhu wuxuu kaliya u baahan yahay inuu bixiyo baakad koronto ku shaqeysa iyo waalka jihada. Sababta oo ah winch-ka lagu rakibay baloogga kaladuwan ee kaladuwan, uma baahna oo keliya nidaam fudud oo gacan ka siiya Haydarooliga, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay horumar weyn oo lagu kalsoonaan karo. Intaas waxaa sii dheer, winch-ka wuxuu soo bandhigayaa waxtarka sare ee bilowga iyo howlgalka, buuqa yar iyo isticmaalka tamarta, wuxuuna leeyahay jaantus kooban iyo qiime dhaqaale oo wanaagsan.
Ku XIRIIR 12000 Taxanaha winch-ka wuxuu ka madax-bannaan yahay qalabka xakamaynta kalluunka si uu u siiyo xorriyad dheeri ah xagga dalabka waxaana lagu dhajin karaa xagga hore ama xagga dambe ee gaadhiga si uu u noqdo nidaam soo kabasho joogto ah ama la qaadi karo. U adeegsiga nidaamka isteerinka awoodda gaariga maadaama uu yahay isha laga helo korontada ayaa u oggolaaneysa H12000 inay si joogto ah u socoto iyadoon batteriga laga saarin.
Gebi ahaanba dhismaha caddeynta culeyska, daxalka iyo biyaha u adkaysta, 12000 waxay leedahay laba xawaare oo xawaare ah, nidaam qufulka makaanikada, jirka birta birta ah, birta birta ah ee birta ka sameysan iyo dhejiyeyaasha, ku xirnaanta dhinacyada 3 dhinac, 100 'fiilada birta ah, 12,000 rodol oo jiidaya karti iyo waxay u baahan tahay gaari gaar ah 34 Qalabka adabtarada waalka ee taxanaha ah ee rakibidda iyo hawlgalka.
Hore: Mashiinka Socdaalka ee Haydarooliga
Xiga: HB taxane cutubyada qalabka maareynta qaabdhismeedka ah
Qiimo jaban Shiinaha NEMA Standard Nepm Ser ...
fiilada goos-gooska ah ee fiilada gooyuhu u ururiyaan
Qiimaha Gaarka ah ee Shiinaha Y, Taxanaha Y2 Low Voltag ...
Qiimaha ugu Fiican Shixnadda Markabka culus ee Shiinaha ...
Qiimaha ugu jaban Shiinaha Custom Fine Finish Turning ...